သငျသညျညာဘက် Fit ပါလိမ့်မယ်
ကျနော်တို့လူတိုင်းသုံးစွဲဖို့အတှကျအသိုင်းအဝိုင်း features တွေရှိသည်
သင်ပျော်ရွှင်စေရန်အဆင်သင့်အသစ် LGBT ဗီဒီယိုဂိမ်း
အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူဤသည်နေ့ရက်ကာလ,ငါတို့ရှိသမျှသည်အ niche အတွက်ပို. ကောင်းပြီ၊ကွီးမွတျကစားသမားအားလုံးအတွက်လာမယ့်ဂိမ်းအသစ်တွေရှိနေပြီးလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်စုဆောင်းမှုတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးသူအားလုံးကိုစုရုံးထားတယ်။ ခေါင်းစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏site၏အမည်ကိုအကြံပြုအဖြစ်,ငါတို့သာ LGBT ဗီဒီယိုဂိမ်း featuring သောစုဆောင်းမှုနှင့်အတူကြွလာကြသည်,သူတို့ကသငျသညျကွာမှုတ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒီ queer ဂိမ်းအားလုံးထဲကလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့်သင်ကစားလိုသောလိင်တူချစ်သူဂိမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူခဲ့သည်။, ဒါေပမယ့္ lesbianေတြအတြက္တကယ္ပဲလိင္တူခ်စ္သူေတြရဲ႕ ဂိမ္းေတြကိုရွာေဖြဖို႔ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ သို့သော်,ကျနော်တို့အမှန်တကယ် lesbian များအတွက်ဂိမ်းအတော်လေးတစ်ဦးအထင်ကြီးအရေအတွက်ကိုရှာတွေ့မှစီမံခန့်ခွဲ,ပြီးတော့ကျနော်တို့ trans ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဂိမ်းများကိုစုသိမ်းသွားလေ၏. We even feature some games for bisexual players and I'm sure you are going enjoy them all.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအပေါငျးတို့သဂိမ်း HTML5 အတွက်လာမယ့်နေကြသည်။ ဒါကအရင်ကထက်ဝေးပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်ကိုဆိုလိုသည်,ဒါ့အပြင်သင်အမှုအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစေလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးထက်ပိုရှုပ်ထွေးဂိမ်း။ ဒါပေမယ့်ဂိမ်း၏ဤမျိုးဆက်သစ်နှင့်ပတ်သက်.အကောင်းဆုံးအရာသူတို့သင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဤဂိမ်းအားလုံးကိုကစားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဘာမှကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ဘရောက်ဇာကိုမှ extension ကိုမဆိုကြင်နာတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ပွင့်လင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဂိမ်းကစားအကြောင်းကိုပါပဲ။ အတွက်ငုပ်နှင့်သင့်စိတ်ကူးယဉ်ပျော်မွေ့။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်လိင်စိတ်၏ကွီးမွတျအခြမ်းကနေဖြစ်သကဲ့သို့,သင်တို့သည်ငါတို့၏site ပေါ်တွင်ဒါပျော်ရွှင်ဖြစ်သွားကြသည်။ သင်ဒီမှာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေမယ့်အရာကိုအကြောင်းစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်စေမည်ဒါကြောင့်ရဲ့အသီးအသီးအမျိုးအစားလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်တူချစ်သူလိင်ဂိမ်းများရှိပြီး LGBT ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်အများဆုံးများပြားသည်။ အများဆုံးကစားတဦးတည်းလိင် simulator အဖြစ်လာမယ့်နေကြသည်,သငျသညျယောက်ျားတွေနှင့်အတူအပြန်အလှန်လိင်ရှိသည်နှင့်လည်းသူတို့တစ်တွေစုံလင်သောမိတ်ဖက်သင့်ရဲ့အဆုံးစွန်စံပြကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်သည့်အတွက်., လူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏virtual universe တွင်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ဘဝကိုနေထိုင်လိုသောကြောင့်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ခြင်း simulator သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားများကြားတွင်လည်းရေပန်းစားသည်။
ဒါကြောင့်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းမှကြွလာသောအခါလူကြိုက်အများဆုံးရည်းစားအတွေ့အကြုံရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ကသင်မိတ်ဖက်တစ်ဦးအဖြစ်လိင်တူချစ်သူဆက်ဆံရေး၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစား၏အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်လို့ပဲ။ ဒီဂိမ်းတွေဟာလိင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အာရုံစိုက်သလောက်အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ဇာတ်ကောင်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ကြပါတယ်။
က trans ဂိမ်းများမှကြွလာသောအခါ,ကျနော်တို့မည်သူမဆိုစိတ်တော်နိုငျသောစုဆောင်းခြင်းရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကပင်ပြီးစီးဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ချွတ်မှုတ်,trans ဆိုတဲ့သောသူငယ်သင့်ရဲ့အကူအညီနဲ့ masturbating သောအတွက်တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ တချို့ကအခြားသူတွေ trans ဆိုတဲ့ porn အရေးယူအပေါ် trans ဆိုတဲ့ရပါလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကို trans နဲ့ယောက်ျား adventures featuring ဂိမ်းများနှင့်အတူလာ. ဤဂိမ်းအချို့တွင်အမျိုးသားများသည်အောက်ခြေတွင်ရှိနေသည်၊အခြားသူများတွင်သူတို့ထိပ်ဆုံးရှိနေစဉ်၊သင်ဖြစ်လိုသောလိင်မိတ်ဖက်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုက်ကို၏bisexual ဂိမ်းများကိုသင်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ခံစားရန်ရသည့်အတွက်အများအားဖြင့် threesome အရေးယူနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်စေအဖြစ်ကစားနိုင်သည့်အတွက်ချိန်းတွေ့ simulator ကိုအတူလာနှင့်သင်မြေပုံပေါ်တွင်မည်သူမဆိုကို fuck ဆိုတဲ့ရ.
ကျွန်ုပ်တို့၏site၏အကောင်းဆုံး feature ကိုကျနော်တို့ကဒီမှာရှိလူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုအခမဲ့ကစားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါသည်,တိုက်ရိုက်သင့် browser မှာ. သငျသညျ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး,သင်သည်တစုံတခုကိုလှူဒါန်းရန်မလိုအပ်ပါငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်ပေးဆောင်စေမည်မဟုတ်. ကျနော်တို့ကဒီမှာကြော်ငြာတွေ feature ပေမယ့်,ကြော်ငြာ non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောဖြစ်ပါသည်,သင် skip နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမဆိုပေါ့ပ် ups သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကြော်ငြာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဓိပ္ပာယ်. ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်စေရန်အသိုင်းအဝိုင်း tools များအပါအဝင်သင့်ရဲ့နေထိုင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စေမည်များစွာသောအခြား features တွေနှင့်အတူလာ။